I-Femina Power Brands 2021: I-Brillare yeeVegan kunye neeMveliso zeNdalo - Amanqaku Omfazi Ombane
Ukuhombisa Izixhobo Uthando Lwezesondo Izilwanyana Zasekhaya Buza Ingcali Ukulungiswa Kwangoko Uxinzelelo Abahlobo Nosapho Iinto Zokuzilungisa Ukuba Ngumzali
I-Femina Power Brands 2021: I-Brillare yeeVegan kunye neeMveliso zeNdalo
Olona nyango lwasekhaya lwenyango kunye nokuwa kweenwele
Kule mihla nakweli ubudala, siyakwazi ukubaluleka kokwenza ukhetho olusempilweni ngokubhekisele ekuhlaleni sisebenza kwaye sitye kakhulu. Nangona kunjalo, kwimpilo entle, kubalulekile ukukhupha iimveliso esizisebenzisa kwimizimba yethu yonke imihla. Ukulawula ukhuseleko lweemveliso zokhathalelo lomntu akucaci njengokusahlula phakathi kokutya okusempilweni kunye nokutya okungenamsoco. Ukuqinisekisa ukuba sikhetha izinto ezicocekileyo nezicocekileyo lukhetho olubalulekileyo olunegalelo kwimpilo yethu iphela.
Kwimizamo yokwamkela iimveliso ngombono oqinileyo wombono kunye nomsebenzi wokuya kubuhle, Ubufazi kwaye KUNYE ne-Edge beza kunye kuhlelo lokuqala lwe Amanqaku oMfazi oMbane ngo-2021 , indibano ebonakalayo yeendwendwe ezihloniphekileyo kunye neenkokheli zeshishini ezivela kwindlela yokuphila, imithombo yeendaba, kunye nomzi mveliso wokuzonwabisa ukutyhila uninzi lweendlela zokuphila ezifunwayo kunyaka ophelileyo.
Uzukisiwe kulo msitho uthe, Khanya yinkampani yaseIndiya ekholelwa ukuba ubuhle bokwenene bukuMpilo elungileyo. Baliqela leenzululwazi zokwenziwa kwezinto ezikholelwa ekwenziweni kweemveliso zokhathalelo lomntu ezinyanisekileyo ezihambisa iinkxalabo ezithile. Zonke Shine iimveliso zii-100% zeVegan, ezingenankohlakalo, kwaye zenziwe ngezithako ezisempilweni nezinyanisekileyo. Ngo-2023, Khanya ijolise ekubeni uphawu lokuqala kunye nolondolozo lomntu kuphela eIndiya I-100% yeVegan, i-100% yendalo, kunye ne-100% yemveliso esebenzayo.
Ukuqonda injongo yophawu kunye nemigangatho yokungena ngaphakathi esebenza njengesiseko sayo, sibuze iziseko ezimbalwa, nantsi into esiyifumeneyo-
Ngokwesiko, ioyile ibonwa njengeyona ndlela yokunyanga enamandla kuzo zonke iingxaki ezinxulumene neenwele kunye nentloko. Kodwa urhwebo lwakutsha nje luthathe izondlo ezityebileyo kude neoyile kwaye baqala ukusebenzisa izimbiwa kunye neoyile yesilicon endaweni yoko.
Oososayensi Khanya bathathe isigqibo sokutshintsha oku kwaye baqala ngophando lwabo olomeleleyo kunye nenkqubo yokuyila ukubuyisela isondlo esityebileyo kwioyile kwaye sibenze babenamandla ngakumbi, nyulu, kwaye banamandla. Emva kovavanyo oluninzi kwilabhoratri yabo, ekugqibeleni, izazinzulu zeza nemixube yeoyile eguqula umdlalo eyi-100% yendalo kunye ne-10X enamandla ngakumbi kuneoyile yesiko. Isiphumo sisizukulwana esilandelayo seeoyile zokunyusa ngesithembiso esiqinisekisiweyo sokujongana neenkxalabo zokhathalelo lweenwele zokuwa kweenwele, inkwethu, kunye neenwele ezomileyo kwiintsuku nje ezili-15. Iza ngopakisha olulodwa kumzi-mveliso wokuqala apho ipakethe nganye ineebhotile ezincinci ezisi-8 ekufuneka zisetyenziswe kubo bonke ubusuku obunye kwiintsuku ezili-15.
Olona nyango lulungileyo ekubuyiseni kweenwele kwakhona
Nazi iinkcukacha zazo zontathu ioyile:
Ukuwa kweenwele kuShicilelo lweoyile:
iikowuteshini zonyaka omtsha
Ukuwa kweenwele kuLawulo lweeoyile zizinto ezinamandla zokudibanisa zonke iinwele zakho. Yindibaniselwano enamandla yeoyile kunye nezinto eziphambili ezenziwayo ezifana nezicatshulwa ze-anyanisi, ikofu, kunye nenkcubeko yeengcambu zeenwele. Izicatshulwa zeoyile yamatswele ziqukethe isalfure enceda ekuphuculeni ukukhula kweenwele. I-Caffeine inefuthe elikhuthazayo entlonzeni ekhokelela ekunyukeni kwegazi lokujikeleza kwiingcambu zeenwele kunye nolawulo lwe-basil olugqithisileyo lokufihla i-scalp. Izinwele zokulawula ukuwa kweenwele kusisisombululo esibanzi kunyango olusebenzayo lokuwa kweenwele kwiintsuku ezili-15.
Ubunzima bokuThambisa ioyile nzima:
iinwele zithintela amayeza ekhaya
Ubunzima beoyile yeoyile kukudityaniswa kweoyile okusebenzayo ukubuyisela ukufakwa kweenwele kwizinwele ezomileyo nezomileyo. Yindibaniselwano enamandla yeoyile kunye nezinto eziphambili ezinje ngeargan, ibhotolo ye-shea, kunye neeproteni zesoy. Ngelixa ioyile yeArgan sisiqinisekiso sobudala esidala esiphuculisayo ukuthamba kweenwele kunye nobutsha. Ioyile yebhotolo yeSheya ilayishwe ngeVitamin E yokubonelela ukuthambisa okuhlala ixesha elide kunye nokondla kwiingcambu zeenwele kunye neoyile yesoya iqulethe iiamino acid ezilungisa ishafti yenwele ukulawula ukwaphuka kweenwele. Iifoto zeoyile ezinzima zokunyusa lukhetho olufanelekileyo lokunyanga iinwele ezomileyo nezinqabileyo kwiintsuku nje ezili-15.
Dandruff Control Shots Oil:
Dandruff Ioyile yeoyile ngumxube weoyile onamandla ukunyanga iiflakes ezomileyo kunye nentloko enomsindo entloko. Yindibaniselwano etyebileyo yeoyile enezithako eziqinisekisiweyo ezinjengeoyile yeseleri, izicatshulwa zemem, kunye neoyile yomthi weti. I-oyile ye-Celery ityebile ku-vithamini A olawula ukugcinwa kweoyile entlonzeni. I-Neem yinto ebonakalisiweyo yobudala kunye neempawu ezichasayo ze-antimicrobial ezinciphisa ukucaphuka kwe-scalp. Ioyile yomthi weti iyanceda ekunciphiseni ukwakhiwa kweoyile entloko kwaye inceda ukunciphisa ukwanda kwebacteria. Ulawulo lweDandruff Shots yeoyile yimveliso ekhuthazwayo yokulawula inkwethu esebenzayo kwiintsuku nje ezili-15.
Fumana ngakumbi malunga nomsitho apha
Izigaba Buza Ingcali Iinto Zokuzilungisa Imisebenzi Kunye Nemali
indlela yokususa amanqatha esisu ngokwenza umthambo
Eyona midlalo mhle yomdaniso wokunciphisa umzimba
ukunyuka okuphantsi kweejini zabafazi
Unyango lwasekhaya lweenwele ezinde nezomeleleyo
Olona hlobo lokuthambisa ubuso lolusu olomileyo olomileyo
Ngaba umgubo wokubhaka ulungele ulusu